आज : २०७५ पौष १ आइतबार स्टुडियो टाईम :१२:३०
बडिगाड महोत्सवमा थानेश्वर संगै झुम्यो खार वजार ।।
कमल पौडेल ६ मंसिर, २०७५/बडिगाड बागलुङ प्रथम बडिगाड महोत्सव तथा पौंदि न्वागी मेला २०७५ को पाचौं दिन थानेश्वर गौतमको प्रस्तुती विशेष भएको छ। दिनभर बडिगाड आइडलको मुल्यांकन गरेका गाएक गौतम गित गाउन स्टेजमा आउँदा हुटिङले मेला नै तताएको थियो। खार वजारमा भएको सो...
बिष्णु माझीकाे स्वरमा मनै छुने दशैँकाे गित युटुवमा सार्बजनिक ।।
ओम राज डाँगी काठ्मण्डौ नेपाली लोक सङ्गीतमा एउटा चर्चीत नाम हो ॠषि खड्का उनले स्वर दियका प्राय सबै गीत बजारमा चर्चामा छन ।लोक संगीत भन्ने बित्तीकै यथार्त पन झल्कीएको गीत भन्ने बुझीन्छ तर पछिल्लो समयमा नेपाली लोक संगीतमा धेरै बीकृती पनी नआएको भने होईन । एतीबेला...
​यस्तो बन्यो ‘शत्रु गते’को ट्रेलर
काठमाडौं, फागुन १८ –प्रदीप भट्टराईको दोस्रो निर्देशन रहेको सिनेमा ‘शत्रु गते’को ट्रेलर शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । निर्माण पक्षले सिनेमाको सिनेमा प्रदर्शन हुनुभन्दा २० दिन अगाडि ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो । शुक्रबार पुल्चोकको ब्रिक्स क्याफेमा एक...
२ रुपैयाँ तिरेर ‘दुई रुपैयाँ’ हेर्ने मौका
काठमाडौं, भदौ २७ - गएको शुक्रबार रिलिज भएको सिनेमा ‘दुई रुपैयाँ’ लाई दर्शकले मन पराएका छन् । रिलिज हुनुअघि नै सिनेमामा भएको गीत ‘कुटुमा कुटु’ले सिनेमाको चर्चा बढाएको थियो । ‘कुटुमा कुटु’ गीतले युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिने नेपाली सिनेमाको गीतको...
‘प्रेमगीत २’ को आक्रामक ओपनिङ
काठमाण्डौ, साउन १५ आजबाट अल नेपाल प्रदर्शनमा आएको वर्षको प्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत २’ ले आक्रामक ओपनिङ गरेको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिन मुलुकका ८० पर्दामा फिल्मको शतप्रतिशत अकुपेन्सी रह्यो । राजधानीमा कलाकारसँगै बसेर दर्शकले फिल्म हेरे । झण्डै २...
सिनेमा ‘२रुपैयाँ’ को गीत “कुटुमा कुटु” ले युटुवमा एक करोड भ्युअर्स पार गरको खुसीयाली मनाएको छ । टिम र प्रेस सँग मिलेर सबै जनाले केक काटेका हुन। ४९ दिनमै “कुटुमा कुटु” ले युटुवमा एक करोडको भ्यु पाएको हो । कुटुमा कुटुको सेलिव्रेसनमा गीतकार, संगीतकार...
प्रेमगीत -२’ को कभर प्रतियोगितामा सहभागी गीतहरु
साउन १ । “प्रेमगीत २” ले आयोजना गरेको कभर गीत प्रतियोगिताका लागि प्राप्त भएका भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन् । “प्रेमगीत २” को कभर गीत प्रतियोगिताको लागि प्राप्त भएका ७ सय वटा भिडियो मध्येबाट २ सयलाई छनौट गरिएको निर्माता सन्तोष सेनले जानकारी दिएका...
यस्ताे छ, सागर राइको ‘चिठ्ठीको जमाना’
गायक सागर राइको आवाजमा समावेश ‘चिठीको जमाना’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो गीतको भिडियोमा सुनिल पोखरेल, एलिसा राई र राज न्यौपानेको मोडलिङ छ । भिडियोको निर्देशन विशाल भण्डारीले गरेका हुन् । अर्जुन तिवारीको छायांकन, निशान घिमिरेको सम्पादन...
गायक विष्णु खत्रीको मौलिक पञ्चेबाजा गीत धौलागिरीको बजारमा ( भिडियो सहित )
थम्मन थापा सन्देश गल्कोट ६ असार । लोक दोहोरीको क्षेत्रमा आफनो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक विष्णु खत्रीको मौलिक पञ्चेबाजामा आधारित गीत धौलागिरीको बजारमा आएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका( ७ मल्ममा जन्मेका गायक खत्री विसं २०५७ सालमा सिसा टल्केको एल्वमबाट...
जेठ २८ – अभिनेता गौरव पहाडी अभिनित सिनेमा ‘रातो घर’ अहिले हलमा छ । सिनेमालाई दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिनेमासँगै म्युजिक भिडियोबाट पनि चर्चामा आएका गौरभलाई धेरैले साइँलाको नामले चिन्छन् । उनले ‘साइँली’ बोलको गीतमा अभिनय गरेपछि सबैले...
सामाजिक सञ्जालमा जेब्रा क्रसिङ यसरी भयो ट्रोल
२० जेठ । नयाँ वर्षसँगै काठमाण्डौ उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको नेपाल सरकारले जेठ १६ देखि जथाभावी बाटो काट्नेलाई दुई सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने नियम लागु गरेको छ । यो नियम अनुसार जहाँ जेब्रा क्रसिङको चिन्ह हुन्छ त्यहि बाट मात्रै पैदल यात्रीले...
भद्रगोल आउँछ भन्ने बित्तिकै दर्शकलाई बन्द हुने पीर !
हाँस्य टेलिश्रृङखला भन्द्रगोल पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । छोटो समयमा दर्शकको मन जित्न सफल भद्रगोलको प्रतिक्षामा धेरै दर्शक छन् । देशको जल्दो बल्दो राजनीतिक अनि समसामयिक विषय बस्तुमा ब्यङग्य गर्दै आईरहेको भद्रगोल यो शुक्रबारबाट पुनःप्रसारणमा आउने जानकारी...
निर्देशकहरु नै फिल्म खेल्न थालेपछि !
२४ माघ= पछिल्लो समयमा निर्देशकहरुले सिनेमामा मुख्य अभिनेता भएर काम गर्ने लहर चलेको छ । राम्रो निर्देशन गरेर दर्शकको मन जितेका निर्देशकहरुले निर्माताको पनि मन जितेर सिनेमामा मुख्य भूमिका निभाउने अवसर पाउन थालेका छन् । केही निर्देशकहरुलाई निर्माताहरुले...
आतिफ अस्लम : जसले कन्सर्ट रोकेर गरे हिंसामा परेकी महिलाको उद्धार
काठमाडौं, माघ ४ – सेलिब्रिटीहरुले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्ध आवाज उठाएको देखिँदै र सुनिँदै आएको छ । फेसबुक ट्वीटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक संजालमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध नारा तथा आफ्ना भनाईहरु पोस्ट गर्नु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । तर उनीहरुले यस्ता...